Corporate Kits, Zvisimbiso, Masitifiketi eSitoko uye maCorporate Binders
Yako yemubatanidzwa kit yakakosha zvakanyanya kune rako rakabatanidzwa bhizinesi. Kuchengeta ako epakutanga kana akasimbiswa makopi ekubatanidzwa kana kuumbwa, pamwe nemamwe magwaro akakosha senge maminetsi emusangano wegore negore, kugadzirisa, marekodhi eakaundi yebhangi, zvitupa zvemasheya uye mafomu e IRS. Yako yemubatanidzwa kit uye rekodhi bhuku inoronga yako yakakosha yemutemo uye emari magwaro.
Makiti edu emakambani anouya mune yakanaka inodziya leatherette kesi ine zita rekambani yako rakashongedzwa negoridhe kumusana. Inosanganisirwa yepamutemo yakabata Ruoko Kwekambani ine zita rekambani yako, nyika uye zuva rekubatanidzwa, bhuku reCorporate Records, muenzaniso seti yemitemo, Corporate Maminetsi, Dhairekitori Rejista uye Mahofisi Rondedzero, rejista yeVashandi, Rejista Yezvokuchengetedza, Mugovanisi. Zvibvumirano uye akati wandei akasarudzika masitifiketi emasheya.
Kuti utore Corporate Kit, ndokumbira ufonere dhipatimendi rebasa revatengi Mon-Fri pakati pa7: 00 AM na5: 00 PM Pacific Nguva pa:
800-830-1055 Mutero Mahara
661-253-3303 Nyika dzese
Kana iwe unogona kushandisa yedu odha fomu kutumira pano: Odha Sangano Ine Kambani Yekubatana
Yakajairwa Corporate & LLC Kit - $ 99
Makambani Anopindirwa akajairwa emakambani emakiti akagadzirwa epamusoro-mhando maviri-toni akavezwa vinyl iyo yakavharidzirwa nemagetsi pamusoro penguva refu-bhodhi kuti ipe hwakawedzerwa hupenyu hwebasa uye hwakanyanya kusimba. Iyo yepamusoro yepamusoro kumashure yakakwira katatu-mhete dhizaini ine mbiri yekuvhura uye yekuvhara zviito zvinobvumira mapeji kuti agare akarara akati sandarara uye atendeuka nyore. Bhainda yega yega inotsanangurwa negoridhe uye inowanikwa mu5 mavara: burgundy, girini, bhuruu, nhema uye shava uye mune matatu masitayera: Standard Portfolio, Standard Slim uye Standard (Yakazara kit ine chisimbiso & Zvitupa)
Yakatetepa Slim Corporate Kit - $ 99
Aya Makambani Akaunganidzwa makiti akagadzirwa nemhando yepamusoro-maviri-toni akavezwa vinyl. Ivo uye vakatetepa kupfuura akajairwa makiti. Iyo yemhando yepamusoro kumashure-yakasungirirwa matatu-mhete inosunga chishandiso ine mbiri yekuvhura uye yekuvhara ekuwedzera anorega mapeji kuti avete akapfava uye achiatendera iwo kutendeuka zviri nyore. Imwe neimwe bhainda yemhando inotsanangurwa negoridhe uye inowanikwa mumavara mashanu: nhema, shava, bhuruu, girini, uye burgundy. (Yakazara kit ine chisimbiso & Zvitupa)
Standard Portfolio kana LLC Kit - $ 99
Kuvharwa kweVelcro kuchachengetedza zvinyorwa zvako zvese munzvimbo. Aya makiti akavakwa emhando yepamusoro-maviri-toni akavezwa vinyl. Iyo yepamusoro yepamusoro kumashure-yakaiswa matatu-mhete nzira ine maviri kuvhura uye yekuvhara ekuwedzera anorega mapeji kuti avete akati sandara uye kutendeuka nyore. Bhainda yega yega yehunhu inotsanangurwa mugoridhe uye inowanikwa mumavara mashanu: nhema, shava, bhuruu, girini, uye burgundy.
Linen Corporate kana LLC Kit - $ 119
Yedu akagadzirwa nemaoko, anorema-basa rinosunga machira akagadzirwa nemhando yerineni, izvo zvinoita kuti vasiyane uye vakanaka. Bhainda yega yega inovakwa nezvinhu zvinorema zvekuwedzera kusimba uye hupenyu hwakareba. Bhainda yega yega yehunhu inotsanangurwa mugoridhe uye inowanikwa mu3 mavara: nhema, nhema uye burgundy uye nhema uye grey. Yakasarudzika Linen Corporate Kit (Yakazara kit ine chisimbiso uye zvitupa)
Docu-Bhokisi Corporate kana LLC Kit - $ 119
Yakagadzirwa kubva kune yekutengesa-giredhi, inorema inonamira chipboard, ichi chakasarudzika dhizaini yekuvaka inopa dziviriro pasina kudikanwa kwakaparadzaniswa kasipisi. Roga roga Docu-Bhokisi rinowanikwa mu2 mavara: nhema uye burgundy. (Yakazara kit ine chisimbiso uye zvitupa)
Zippered Portfolio Corporate kana LLC Kit - $ 130
Aya zipu emakambani emakambani isarudzo yakanakisa kune avo vanotsvaga portfolio mhando bhainda. Sewn micheto, kuvhara zipi uye makona esimbi zvinoita izvi zvipfeko sarudzo inoshamisa. Iri zita resangano rakatemerwa pane chrome yakafukidzwa nendarira ndiro. (Yakazara kit ine chisimbiso & Zvitupa)
Blumberg Tsvuku Russia Leather Corporate & LLC Kit - $ 485
Ratidza kugona kwako kune vangangoisa mari, wako mubhanga, CPA nemagweta. Yakatumidzwa yakanakisa Red Russia matehwe ematehwe anoshandiswa kugadzira iyo, iyi inorema-basa, yepamusoro-chinzvimbo chekodhi rekodhi bhuku ndiyo yakanakisa kitiki yekambani inogona kutorwa nemutungamiriri. Paunoraira, iwe uchadoma zita rekambani iwe raunoda pane zvitupa, chisimbiso uye ruoko rakadhindwa mu24K goridhe kumuzongoza. Zvakare, ratidza mamiriro uye gore umo mubatanidzwa wakarongeka. Iyi kit inouya ne20 izere-peji, zvitupa zvakaverengwa zvine yakazara-peji stub yakadhindwa ine zita rekambani, nyika, masiginecha mazita uye capitalization. Iwe unogona kuraira zvimwe zvitupa sezvazvinodiwa. Kune makambani kana maAdvs. Inouya nemaminetsi emakambani akadhindwa nemirau. (Yakazara kit ine chisimbiso & Zvitupa)